Ozbeky DJ, miezaka mamerina ny lazan’ireo mozika sôvietika fahiny · Global Voices teny Malagasy
« Ny ezaka feno herimpo-[n'ireo mpiangaly mozika] no omeko voninahitra. »
Voadika ny 01 Novambra 2020 3:00 GMT
Pikantsarin'ny fantsona YouTube [ru] an'i Hamdam Zakirov momba ny mozika ozbeky sy sôvietika.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mitondra mankany aminà pejy amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra].
Matetika ny hira malaza dia mifamatotra aminà vanimpotoana iray voafaritra mazava tsara teo amin'ny fiainana, ary ny fanondroana hoe mozika fahiny, na “rétro”, dia lasa kolontsaina iray mitokana mihitsy, noho ny fisian'ny tambajotra sôsialy. Izany koa no mitranga ho an'ny vakoky ny mozika sôvietika. Mba hahafantarana misimisy kokoa momba ireo mpankafy azy, nitafa izaho sy Hamdam Zakirov, DJ iray avy ao Ferghana any Ozbekistàna, izay miaina any Finlandy amin'izao fotoana izao. Manana ny fantsona mozika azy manokana ao amin'ny Youtube izy, ny DJ Hem—Soviet Grooves avy any Helsinki.
Noho ny lafiny bikabikan-dahatsoratra dia nokiraina sy nafohezina io antsafa io.
Filip Noubel (FN) : Ahoana no nahatonga anao ho DJ ary nahoana no nisafidy handao an'i Ozbekistàna tanindrazanao ka ho ao Finlandy ?
Hamdam Zakirov (HZ) : Tamin'ny 1994, nilaozako i Ozbekistàna mba handeha honina tany Maosko, toerana nipetrahako nandritra ny valo taona. Taorian'izay, niafara tany Finlandy izaho sy ny vadiko, vehivavy môskôvita manana razambe finlandey. Hatramin'ny 2001 aho no mipetraka ao Finlandy, saingy vao dimy taona monja izao no nanombohako nanangona ireo kapila “vinyles”. Taona folo lasa izay, nisy namako finlandey iray nanontany ahy momba izay mba fantatro mikasika ny gadona “funk” sôvietika. Rehefa nosaintsainiko ny mozika fiangalin'i James Brown, dia novaliako hoe tsy nisy tany ny tahàka izany. Nampiako hoe karazana mozika manaitaitra filàna ny “funk”, izay tsy afaka ny hisy velively fony vanimpotoana sôvietika tsy nahazoana niresaka fananahana (tahaka ny nanazavan'ny olona iray nandray anjara tamin'ilay kaonferansa an-dahatsary nifanaovan'i Maosko sy New York, nilazany fehezanteny iray lasa nalaza hoe [fr]: « Tsy misy ao anatin'ny URSS ny resaka firaisana ara-nofo»). Tsy niombona hevitra tamiko ilay namako, ary nampanantena ny hanadihady. Ary dia nahita zavatra tokoa aho ! Eny e, mazava loatra, tsy mahatoraka mihitsy ny angovo sy ny fomba fiangalin'i James Brown, saingy, raha ny marina, dia “jazz-funk, disco-funk” ary singa maromaro amin'ny “funk” tany anatin'ireo fandrindràna mozika tena mahaliana. Tsaroako ity tantara ity fony aho nanomboka nanangona ireo “vinyles”. Mba hahitana valiny tamin'ilay fanontaniana napetrak'ilay namako, nohenoiko tsara ireo kapila novokarin'ireo artista sôvietika tonga nihaona tamiko. Ny niafaràny, rehefa nananako ny fahafahana nilalao ny fotoana voalohany naha-DJ ahy, dia efa nanana lisitra filalao sahady aho.
FN : Aiza no misy milalao mozika sôvietika? Ary ho an'iza?
HZ : Tao an-tranoko aho no nilalao ny voalohany maha-DJ ahy, nanoloana ireo namana vitsivitsy. Fa tamin'ny Janoary 2016, nihaona tamin'ny kaomity mpiandraikitra ny fikarakaràna ny festival Tusovka aho, izay fanao ao Helsinki hatramin'ny 1999. Nandritra io fetibe io, nisy finlandey mozisiàna, sy avy amin'ireo firenena tao anatin'ny firaisana sôvietika fahiny, niray sehatra nilalaovana. Tamin'io taona io ihany koa no nilalaovako ny fandraisako anjara voalohany. Ary nanomboka ny taona 2016, dia vahiny fanàsan-dry zareo hatrany aho ho DJ, izay voninahitra goavana ho ahy. Im-betsaka aho no nilalao tao amin'ny trano fisakafoanana ozbeky iray, ary indray mandeha tamina fampakarambady. Hita tao anatin'ireo olona mpankafy ahy daholo na ireo olona avy amin'ny firaisana sôvitika fahiny, na ireo Finlandey liana amin'izay mitranga any amin'ireo firenena any atsinanan'ny sisintanin-dry zareo.
FN : Manao fampahafantarana ireo mozika ozbeky tamin'ny vanimpotoana sôvietika ihany koa ianao. Nahoana ?
HZ : 50 teo ireo kapila an'ireo Ozbeky artista no nananako tao anatin'ny tahiry. Tany am-piandohan'io taona io, nanapaka hevitra aho ny hisafidy fandaharana iray handefasana mozika ozbeky, niainga avy amin'ireo ampahany voatiliko, avy eo niditra lalindalina kokoa tany anatin'ireo tonony tsirairay avy, ny tantaran'ny fampisehoana tsirairay, ireo mpanoratra ny mozika, ary nanapaka hevitra hoe ny zavatra tsara indrindra dia ny mamokatra podcast. Hatreto aloha, ampahany roa tamin'ny podcast novokariko no efa navoakako, izay afaka hitanareo ao amin'ny fantsoko YouTube. Rehefa nanomboka ny fihibohana noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 tamin'ity taona ity, iny andro iny toy ny tao Norouz, Taombaovao ho an'i Azia Afovoany, sambany aho nilalao tamin'ny maha-DJ ahy tety anaty aterineto, izay mozika pop ozbeky ny ankamaroany. Fijerena in-2.000 no azoko!
Ireo artista tena ankafiziko : tety anaty tambajotra, nahita aho mozika vitsivitsy an'i Batyr Zakirov, ary avy hatrany, tonga saina hoe ireny hira ireny no voalohany tsaroako, izany hoe tany amin'ny fahefatra na fahadimin'ny taonako tany no voalohany tena nifantohako tamin'ny tonony. Angamba azoko atao ny miteny hoe ireo hira « Седая любовь » [Fitiavana volondavenona] sy « Песня о счастье » [Hiran'ny Hasambarana] an'i Zakirov no nanefy ny fomba fijeriko ny tontolo amin'ny mason'ny poeta. Tamin'ny taona naha-tany an-tsekoly ahy, nihaino sy latsa-pitiavana tamin'ny tarika « Оригинал » [Ny Niandohana] aho. Tiako ihany koa ny manamarika hoe nampiako an'i Nasiba Abdoullayeva ny lisitr'ireo artista ozbeky ankafiziko. Tokamiavaka ireo kapila roa voalohany novokariny tany amin'ny taona 80 tany, tena fandrindràna mozika mpisava làlana raha ny tontolon'ny mozika pop ozbeky no resahana.
Ity misy lisitra iray filalao natokako ho an'ireo anarana goavan'ny mozika sôvietika ozbeky, ka isan'ireny i Batyr Zakirov :
FN : Aiza ianao no mahita ireo kapila “vinyles” ?
HZ : Androany, miisa eo amin'ny 6.000 eo ny kapila voatahiriko. Nahazatra ahy ny nanangona izay rehetra reko nandritra ireo vanimpotoana samihafa tamin'ny androm-piainako. Rehefa nandeha ny fotoana, tsy dia lany fotoana nitety mpivarotra rakitry ny ela intsony aho, fa amin'izao fotoana izao, misy kapila sy hira manokana tadiaviko. Eny amin'ireo mpamokatra sy ireo toerampivarotana goavana aho no mividy ireo vokatra vaovao. Ary ho an'ireo kapila tranainy, misy maro ireo sehatra iraisampirenena ety anaty aterineto natokana ho amin'izany. Arakaraky ny fisian'ireo anarana mozika marobe, sy rakikira mivoaka, na vaovao io na tranainy, dia matetika no tena zara raha misy kapila avoaka. Indraindray 200 hatramin'ny 300, misy aza 100 fotsiny. Ary io, tsy mbola ny tarehimarka ambany indrindra aza: manana aho famoahana tokamiavaka vitsivitsy izay navoaka tsy nihoatra ny 50 na 30 isa.
Trano iray fivarotana zavamaneno ao Tachkent, samy amidy ao ny zavamaneno tandrefana sy ny nentindrazana ozbeky. Sary an'i Filip Noubel, nahazoana alàlana.
FN : Any anatin'ireo lahatsarinao ao amin'ny Youtube, voamariko ny filazànao ny hakanton'ny mozika fony vanimpotoana sôvietika, no sady isisihanao ny filazana hoe tsy misy ifandraisany amin'ny fanembonana ny rafitra sôvietika izany. Afaka ambaranao misimisy kokoa aminay ve ny momba izay?
HZ : Tena mazàna no efa nahazoazo taona ireo mpihaino ahy, na ao anatin'ny taonan'ireo manomboka mahatsiaro manembonembona. Matetika aho no mahazo fanehoankevitra milaza hoe, nandritra ny vanimpotoana sôvietika, nilalao sy nihira hira sy mozika mahafinaritra ny artista. Saingy ny zavamisy hoe, mandritra ny fampifangaroana sy ny fiakarako an-tsehatra, dia mbola misy ny fanaingoana ataoko eo amboniny. Izay rehetra hira notsongaiko sy ampiasaiko any anatin'ny fampifangaroana, ny fiakarana an-tsehatra sy podcasts dia, na teny tsy mahazatra sy malalaka avy amin'ny ideolojia sôvietika, na fandrindràna mozikaly izay nahavitàn'ireo mpiangaly mozika nampiseho sy nanome ny tsara indrindra avy tamin'ny talenta ananany, ny fahalalàny ny mozika pop maoderina sy tandrefana. Ny zavatra rehetra niainan-dry zareo sy ireo andrana izay tsikaritro 40 na 50 taona taty aoriana tany anatin'ireo kapila tranainy, ary naeliko ho ren'ireo mpihaino ahy, dia afaka faritana ho toy ny feno herimpo. Ireo mpiangaly mozika tamin'izany fotoana izany, toy ireo mpiandany nandritra ny ady, dia nahavita nandingana sakana marobe teny amin'ny làlana nizorany mba hilalaovana izay mozika tiany holalaovina. Azo ambara hoe manome voninahitra ny ezaka feno herimpo nataon-dry zareo aho.
Amin'izay zavatra izay, tena mahaliana tokoa ny fametrahan'ireo ampahany avy amin'ny lafy ozbeky ny tenany ao anatin'ireny hira fony vanimpotoana sôvietika ireny. Im-betsaka no nisy niteny tamiko fa mampiasa be loatra ny hira rosiàna aho. Mariky ny fifandraisana manahirana tezain'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao manoloana ny lova navelan'ny sôvietika ho azy izany. Fa ho ahy, tsy dia misy lanjany loatra ny teny ampiasaina amin'ny hira. Rehefa mikarakara ny fandaharako aho, tena tandroviko fatratra ny fanafangaroana voadio tsara sy tsy fahita firy eo amin'ny halalin'ny feo sy ny maha-matianina, ny taokanton'ny fisehoana an-tsehatra, ny fahaizamamorona anatin'ireo fandrindràna mozikaly, ary vokatr'izany, rehefa mitambatra ireo singa rehetra ireo dia tokony hiteraka karazana setry, tsy hoe avy amin'ireo ozbeky mpihaino monja ihany, na ireo olona miaina na niaina tao Ozbekistàna, fa koa any amin'ny rehetra [mihaino ahy] manerana izao tontolo izao.
Saingy avelako ho ireo mpihaino ahy no hitsara hoe nahomby aho na tsia!
Raha te-hahafantatra misimisy kokoa momba ny fiovàn'ny fiarahamonina ozbeky, tsidiho ny rakitra manokana novokarinay (amin'ny fiteny frantsay).